Xarunta Daryeelka iyo Dhaqan Celinta Sheekh Cali Suufi ee Garoowe, Soomaaliya
Asaaska iyo taariikhda Xarunta
Xaruntu waxay ka asaasantay baahiyo is biirsaday oo soo wajahay dadka ku nool magaalada Garoowe. Dhibaatooyinka oo ay ka mid yihiin arimo xaga nolosha iyo dhaqanka ah oo soo wajahay caruurta ay dhaleen dadka ku barakacsan dalka gudihiisa, dadka ka shaqaysta suuqyada, khaasatan kuwa waqtiga dheer ka maqnaada caruurahooda, da’yarta aabayaashood ay la degtay waxyeelada qaadka iyo arimo kale oo ka dhashay xaalado faqiirnimo oo dagaaladu ay keeneen iwm.
Sida aan daraasad ku ogaanay, qaadku uu saamayn wayn ku leeyahay daryeelka iyo ko´ritaanka caruurta, kadib markii uu qaadku aabayaashood hawlgab ka dhigo. Xaga daryeelka waxaa hooyooyin badan soo wajaha hawlo culus oo la xidhiidha maaraynta nolosha, daryeelka iyo la socoshada xalada ay caruurtoodu ay maalin kasta ku sugan tahay.
Waxaa jira hooyooyin badan oo subixii u kalaha suuqyada si ay nolosha qoyska uga soo maareeyaan, halkaana waxaa ku banaanaatay dowrkii aabanimo.
Waxaa caado u noqotay caruuraha badan marka subixi toosaan in ay suuqyada ku faafaan, halkaasna oo ay ka bartaan dhaqan xumo, waxay ku biiraan bushashka iyo maqaaxiyaha ay fadhiiyaan dadka qaad cuna oo ay ka bartaan qaadka, sheekooyinka iyo dhaqanka ku salaysan dhaca iyo khiyaamooyinka, asaraarka bulshada iwm., waxaa suuqyada ku batay caruur aan cidina masuul ka ahayn oo dayacan oo ay ka muuqato diif, gaajo iyo basar xumo badan, marmarna waxay qabtaan shaqooyin dhib badan oo liidata, isla markaana aan dakhli wanaagsan lahayn, waxaa magaalada ku batay amaan darada, xatooyada iyo dhacdooyin kale oo badan oo halkan aan lagu soo koobi karin,
taasina waxay raad ku yeelatay dhaqankii guud ee caruurta (dhaqanka caruurta oo is jiidanaya awgeed), arimahaasu waxay keeneen in dad xilkas ah ay masuuliyad iska saaraan dhibaatada taagan una hawl galaan sidii caruurta suuqyada looga saari lahaa looguna jihayn lahaa sidii ay u heli lahaayeen daryeel binu aadanimo iyo waxbarasho taaba gal ah, laakiin awooda oo yar arintaa laguma wada guulaysan, balse waxaa la odhan karaa taalabo ayaa horay looqaaday.
Xarunta Sheekh Cali Suufi waxaa la asaasay 11 May 2007, waxayna ka aasaasantay baahidaa aynu wax ka soo sheegnay. Xarunta waxaa lagu aasaasay toban caruur ah oo ahaa kuwii kuwii ugu liitay, kuwaas oo daryeel iyo dhaqan celis ahaan loo geeyey. Xaruntu intii ay furnayd waxay ku tallaabsatay guulo wax-ku-ool ah oo durbaba midhaheedii soo baxeen. Wixii waqtigaa ka danbeeyey xaruntu waxay soo martay marxalado kala duwan.
Tirada ardyda ku jirtaa waxay ahayd mid is bed bedelaysay, sidaa awgeed maanta (18.11.2008) oo somalitalk soo booqday waxaa xarunta ku jira 100 arday, kuwaas oo da’doodu u dhaxayso 7 –15. Intii ay xaruntu furnayd waxaa jiray arday dhaqankoodu isbedelay oo dib ugu noqday qoysaskii iyo goobihii waxbarashada ee ay horay uga tirsanayeen, weliba intaa kagama aanu hadhnee waanu ka si war haynaa xaaladadooda, ardayda hadda ku jirtana waxay higsanayaan meel aanay weligood ku hamiyi lahaayeen” ayuu yidhi mas’uul ka tirsan xarunta.
Da’yarta xarunta ku jirta 40% waa dadka soo barakacay, 30% waa dadka deegaanka ee agoomaha ama aabayaashood ay howl gabeen sida dadka qaadka cuna, inta soo hadhay waxay u badan yihiin deegaanka, waana caruur dariiqyada laga soo ururiyey iyo kuwo dadkoodu aanu waxba haysan. Xarunta waxaa haysata culays wayn oo dadka farqiirka ah ay ku danaynayaan in caruurahooda ay keenaan, laakiin marka la eego mugga iyo awooda xaruntu ma aha arin sahlan ama ay xaruntu dabooli karto baahida wayn ee arinkaa ka taagan awgeed.
Xarunta waxaa lagu bartaa waxbarasho aasaasi ah oo dhamaystiran, isla markaana u kala qaybsan labada qaybood ee diiniga iyo maadiga oo ah manhaj carbabi ah oo sidan kala ah:
Tarbiyada Islaamka (Waxbarasho dhamays tiran)
Waxbarashada maadiga (waxbarashada dugsiga oo dhamays tiran)
Luqadaha lagu bartaa waa: Soomaali, Carabi iyo English.
Waayo aragnimada waqtiga uu dugsigu furnaa, guulaha uu gaadhay iyo duruufaha jira ee la xidhiidha baahida wayn ee loo qabo dugsiyo noocan oo kale ah, waxay dhiiri gelisay in dugsiga la siiyo dhul ku filan oo deegaan u noqon kara, waxaa kale xarunta haysta baahi joogto ah oo la xidhiidha xaga nolosha iyo adeega.
Xaruntu waxay ku jirtaa ama ku shaqaysaa dhisme kiro ah oo ka kooban taban qol (10 qol), barxad yar, afar musqulood iyo jiko, isku darkooduna waxay ku fadhiyaan 30m2, intaas ayaa dhamaan lagu filiyaa baahida shaqo sida daryeelka, waxbarashada iyo madadaalada, sidaa awgeed waxaa jirta baahi wayn oo loo qabo dhisme dhamays tiran oo ugu yaraan qayb dabooli kara baahida ka taagan arintaa.
Kharashaadka joogtada ah:
Xarunta cid ay si gaar ah ugu tiirsan yahay ma jirto, mana laha dakhli meel kale ka soo gala, sidaa awgeed kharashaadka la xidhiidha daryeelka (gogosha, cuntada, biyaha macaan, caafimaadka, iwm.) iyo adeega sida (nadaafada, isgaadhsiinta, korontada, baahida macallinka, agabka waxbarashada) waxaa bishii ku baxda in ka badan 2800 Eruo oo u dhiganta USD 3500 mana aha wax meel lagu og-yahay.
Hadaba waxaanu leenahay nagala qayb qaado daryeelka da’yarta maanta iyo taaba gelinta aqoonta.
Waxaanu baadi goob ugu jirnaa feker iyo waxqabad wada socda, hadaba yaa ka qayb qaadan kara:
Daryeelka da’yarta, toosinta dhaqanka iyo kobcinta aqoonta...? Hadaba gacan lnagu sii hawsha...
Maamulka xarunta daryeelka iyo dhaqan toosinta da’yarta ee Skeekh Cali Suufi, Garoowe, Soomaaliya.
Yasiin Cabdallahi Cali
Tel.: 00 252 90 724 462
Maamulaha Dugsiga Sheekh Cali Suufi
Cabdi-Daahir Xirsi Cali
Tel.: 00 252 90 746 832
Hal-kudhiga Somalitalk: Aqoon-baa-ugu gaajo kulul, xog-baa-ugu baahi badan
WD Somalitalk, Soomaaliya, Garoowe